လစ်ဗျား - အများပိုင်သတင်း။ အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B Marketplace သတင်း
Pompeo: ရုရှားသည်မြေထဲပင်လယ်၌“ Chaos” မျိုးစေ့ကိုကြဲသည်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 16, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 16, 2020 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
ပြည်နယ်၏အမေရိကန်အတွင်းရေးမှူး Mike Pompeo ကရုရှားကိုမျိုးစေ့ကြဲသည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည် မြေထဲပင်လယ်ဒေသတ ၀ န်းရှိနိုင်ငံများတွင်“ ပရမ်းပတာ၊ ပconflictိပက္ခနှင့်ကွဲပြားခြင်း” ။ အတွင်းရေးမှူး Pompeo ကမော်စကိုသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုဖြန့်ဝေရန်နှင့်လစ်ဗျား၊
နိုဝင်ဘာလ 10, 2020 နိုဝင်ဘာလ 10, 2020 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
တနင်္လာနေ့မှာ, လစ်ဗျားနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဖိုရမ် (LPDF) ကိုတူနီးရှားတွင်စတင်ခဲ့သည်လစ်ဗျားပါတီများမှပုဂ္ဂိုလ် ၇၅ ဦး နှင့်တူနီးရှားသမ္မတ Qais Said ၏ရှေ့မှောက်တွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ တူနီးရှားသမ္မတကဤခြေလှမ်းသည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဖြစ်သည်ဟုအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။
လစ်ဗျား - GNA အရာရှိတစ် ဦး အပါအ ၀ င် Tarhuna တွင်တွေ့ရှိသောအလောင်း ၁၇ လောင်း
လစ်ဗျားအစိုးရ၏ထရီပိုလီအစိုးရသဘောတူညီချက် (GNA) က၎င်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည် ငါးအစုလိုက်အပြုံလိုက်သင်္ချိုင်း ထရီပိုလီ၏အရှေ့တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ ၈၀ အကွာ၊ အနောက်ပိုင်းတာဟူနာတွင်အနည်းဆုံးလူသေအလောင်း ၁၇ လောင်းပါရှိသည်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအရမကြာသေးမီကတူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့သောအလောင်းများ၏သင်္ချိုင်းမှအလောင်း ၁၁၂ ခုသို့မြှင့်တင်ခဲ့သည်။
လစ်ဗျားနိုင်ငံ၏ထုတ်လုပ်မှုမြင့်တက်မှုကြောင့်ရေနံစိမ်းသည်ဒေါ်လာ ၄၀ အောက်ကျဆင်းခဲ့သည်
လစ်ဗျားအမျိုးသားရေနံကော်ပိုရေးရှင်းကသောကြာနေ့တွင် Sider Port မှရေနံတင်ပို့မှုကိုလာမည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဖွင့်ရန်မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ လစ်ဗျားက၎င်း၏ရေနံထုတ်လုပ်မှုကိုတစ်နေ့လျှင်စည်တစ်သန်းကျော်အထိတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည် လေးပတ်အတွင်း။ ၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုသည်ပြီးခဲ့သည့်လကထက်များပြားလာသည်။
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပAccordိပက္ခ၏အဓိကပါတီများဖြစ်သော National Accord of Government (GNA) နှင့်လစ်ဗျားအမျိုးသားတပ်မတော် (LNA) မှကိုယ်စားလှယ်များ၊ လေးရက်ကြာအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းမှုအပြီးတွင်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည်။ ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်စတက်ဖနီဝီလျံ (Mr. Stephanie Williams) သည်သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့်သမိုင်းဝင်အခိုက်အတန့်အကြောင်းကိုပြောကြားခဲ့သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေနံဈေးနှုန်းကျဆင်းပြီး OPEC + Meeting လာသည်
အောက်တိုဘာလ 19, 2020 အောက်တိုဘာလ 19, 2020 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
တတိယသုံးလပတ်အတွင်းတရုတ်၏စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းသည်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်နိမ့်သောကြောင့်နိုင်ငံတကာရေနံစျေးနှုန်းများတနင်္လာနေ့တွင်ကျဆင်းခဲ့သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအခြားနိုင်ငံများ၌ Coronavirus ကူးစက်မှုအသစ်များတိုးများလာခြင်းကြောင့်တရုတ်၏စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်သည်မလွှဲမရှောင်သာကျဆင်းသွားသည်။
မာလီ - အီးယူအာဏာသိမ်းမှုပြီးနောက်သင်တန်းကိုဆိုင်းငံ့
သြဂုတ်လ 26, 2020 သြဂုတ်လ 26, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
ဥရောပသမဂ္ဂ po ဆိုင်းငံ့လိုက်သည်ရန်တွေ့ခြင်း နှင့်စစ်တပ်လေ့ကျင့်ရေးမစ်ရှင် မာလီနိုင်ငံတွင်စစ်တပ်ကပြုလုပ်ခဲ့သောအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခြားရေးရာကိုယ်စားလှယ် Josep Borrell ကအရပ်သားများအပြင်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ရေးမစ်ရှင်အားယာယီရပ်ဆိုင်းထားမည်ဟူသောကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
လစ်ဗျားပြည်တွင်းစစ်; အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကြေငြာခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်း
လစ်ဗျားပြည်တွင်းစစ်အတွက်ပါတီများကဖော်ပြခဲ့သည် ၎င်းတို့သည်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကိုချက်ချင်းတည်ထောင်ရန်ရည်ရွယ်ထားပြီးရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။ လစ်ဗျားနိုင်ငံသည်နှစ်ပေါင်းများစွာစစ်ပွဲများဆင်နွှဲနေခဲ့ပြီးအတိုက်အခံအင်အားစုများအကြားသဘောတူညီမှုမရရှိသေးပါ။ နှစ်နိုင်ငံအကြားသဘောတူညီမှုကိုကုလသမဂ္ဂကသဘောပေါက်သည်။
လစ်ဗျားရှိ“ လှည့်စားတတ်သောစိတ်ငြိမ်းရာ” အကြောင်း Maas ကသတိပေးသည်
သြဂုတ်လ 18, 2020 သြဂုတ်လ 18, 2020 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
ဂျာမန်နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီး Heiko Maas ကသူဖုန်းခေါ်တာကိုသတိပေးခဲ့တယ် “ လှည့်စားတတ်သောတည်ငြိမ်မှု” လစ်ဗျားမှာ ယူအေအီးအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုသို့မရောက်မီလစ်ဗျားသို့အံ့အားသင့်စွာလည်ပတ်ခဲ့သည့် Maas ကဘာလင်တွင်စတင်ခဲ့သောဖြစ်စဉ်သည်ပtheိပက္ခကိုဖြေရှင်းရန်သင့်လျော်သောမူဘောင်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်
သြဂုတ်လ 11, 2020 သြဂုတ်လ 11, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
တူရကီသည်မငြိမ်မသက်စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းကိုဆက်လက်ကြုံတွေ့နေရသည်။ တူရကီသမ္မတ Recep Tayyip Erdoğanသည်ရေရှည်တွင်ဤသို့သောလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ရန်ပုံငွေမလိုအပ်ဘဲကမ္ဘာပေါ်တွင်ထင်ရှားကျော်ကြားသူဖြစ်သည်။ တူရကီသည်ဆီးရီးယားနှင့်လစ်ဗျားပconflictsိပက္ခများကိုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်သည်အော်တိုမန်အင်ပါယာကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်အာဒိုဂန်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။
သြဂုတ်လ 10, 2020 သြဂုတ်လ 10, 2020 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်နှင့်အီတလီတို့သည်လစ်ဗျားလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့မှုအားဖောက်ဖျက်သူများအားဖိအားပေးမှုများတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ အဆိုပါသုံး ဦး သည်ယခင်ကဘရပ်ဆဲလ်တွင်ပြုလုပ်သောအီးယူထိပ်သီးအစည်းအဝေး၌ဇူလိုင်လလယ်တွင်ပိတ်ဆို့မှုအားချိုးဖောက်သူများကိုအပြစ်ပေးရန်ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ တူရကီ၊ ယူအေအီးနှင့်ဂျော်ဒန်ကုမ္ပဏီများစာရင်းပြုစုထားသည်။
သြဂုတ်လ 8, 2020 သြဂုတ်လ 8, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
Coronavirus သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းသတင်းများရှေ့တွင်ဆက်လက်ရှိနေသည်။ လက်ရှိတွင်ကမ္ဘာအနှံ့ကူးစက်ခံရသူ ၁၉.၅ သန်းရှိပြီးသေဆုံးသူ ၇၂၄၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ မျက်မှောက်၌ပျောက်ကင်းသောကုသမှုမရှိဘဲနံပါတ်များသည်ဆက်လက်တက်နေသည်။ များစွာသောဓာတ်ခွဲခန်းများသည်ကာကွယ်ဆေးကိုဖန်တီးရန်နှင့်လူနာများကိုကုသရန်အတွက်လက်ရှိဆေးများကိုပိုမိုအသုံးချရန်မမောနိုင်မပန်းနိုင်လုပ်ဆောင်နေသည်။
ဇူလိုင်လ 25, 2020 ဇူလိုင်လ 25, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
အမေရိကန်စစ်တပ် စွပ်စွဲချက် ရုရှားသည်လစ်ဗျားရှိဆာတီမြို့တွင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းအသစ်များပေးပို့ခဲ့သည်။ တကယ်လို့ဒီအစီရင်ခံစာဟာတကယ်တမ်းကျတော့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ရုရှားကမြောက်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့အင်အားသုံးပိတ်ပင်မှုကိုအပြည့်အ ၀ ချိုးဖောက်နေတယ်။ သတင်းအချက်အလက်များကိုအမေရိကန်စစ်တပ်အာဖရိကစစ်ဌာနချုပ် (AFRICOM) မှထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇူလိုင်လ 19, 2020 ဇူလိုင်လ 19, 2020 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
ဥရောပသုံးနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များကခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည် လစ်ဗျားစစ်ပွဲများအတွက်လက်နက်ပိတ်ပင်ထားမှုကိုချိုးဖောက်သောနိုင်ငံခြားအင်အားကြီးနိုင်ငံများအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများချမှတ်ရန်။ ရုရှား၊ ယူအေအီးနှင့်အီဂျစ်နိုင်ငံများကို ရည်ရွယ်၍ မည်သည့်တိုင်းပြည်ကိုမှမဖော်ပြခဲ့ပါ။
ဇြန္လ 30, 2020 ဇြန္လ 30, 2020 Doris Mkwaya	မှတ်ချက် Leave
ပြင်သစ်သမ္မတ Emmanuel Macron တူရကီကလစ်ဗျားပconflictိပက္ခမှာသူ့ရဲ့အခန်းကဏ္forကိုဝေဖန်ခဲ့သည် Macron ကဂျာမန်အဓိပတိ Angela Merkel နှင့်ဘာလင်အနီးရှိ Mizeburg တွင်တွေ့ဆုံပြီးနောက်ဤအခန်းကဏ္“ သည်အာဖရိကနှင့်ဥရောပအတွက်ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပြင်သစ်သည်ပြင်ပဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုရှုတ်ချလိုက်သည်။ လစ်ဗျားနိုင်ငံ.
လစ်ဗျား၌တွေ့ရှိခဲ့သော Mass Mass Grave
ဇြန္လ 29, 2020 ဇြန္လ 29, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
အလောင်းအနည်းဆုံးကိုးခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် လစ်ဗျားအနောက်ပိုင်း Tarhouna မြို့ရှိအစုလိုက်အပြုံလိုက်သင်္ချိုင်းတွင်း၌။ ဒီကြေငြာချက်ကိုကုလသမဂ္ဂမှအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ National Accord of Government (GNA) ၏တပ်ဖွဲ့များကပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Pro-GNA တပ်ဖွဲ့များသည် Facebook တွင်ထိုကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
လစ်ဗျား - GNA, LNA မှ Sirte ကျော်တိုက်ခိုက်ပါ
လစ်ဗျားနိုင်ငံတွင် National Accord of Government (GNA) လက်အောက်ရှိအင်အားစုများ၏လုပ်ဆောင်မှု Sirte မြို့ကို General Khalifa Haftar လက်ထဲပြန်ယူဖို့ ဆက်လက်။ Haftar အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးတောင်းဆိုချက်ကိုတူရကီကထောက်ခံသည့်ထရီပိုလီအစိုးရကမူသူတို့သည် Sirte မပါဘဲစားပွဲတွင်ထိုင်။ မရကြပါ။
ဇြန္လ 21, 2020 ဇြန္လ 21, 2020 ဘင်နီဒစ် Kasigara	မှတ်ချက် Leave
အီဂျစ်သမ္မတ Abdel Fattah El-Sisi ကမိန့်ခွန်းပြောကြားသည် စနေနေ့တွင်အီဂျစ်ရုပ်မြင်သံကြားမှထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးအီဂျစ်၏လစ်ဗျားသို့တိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်မှုသည်“ နိုင်ငံတကာ၏တရားဝင်မှုအတွက်ရရှိနိုင်ပြီ” ဖြစ်ပြီးရည်မှန်းချက်များပါ ၀ င်သည်။ အနောက်ဘက်စစ်ဇုန်ရှိအီဂျစ်စစ်တပ်များကိုစစ်ဆေးစဉ် Sisi ကပြောကြားခဲ့သည်။
Adieu, တူရကီ? တူရကီကလစ်ဗျားကိုပြင်သစ်ကဒေါသထွက်
ဇြန္လ 18, 2020 ဇြန္လ 18, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Jean-Yves Le Drian ဒေသတွင်းသို့စစ်သွေးကြွများ၏လက်ဖြင့်လစ်ဗျားရှိတူရကီ၏လုပ်ဆောင်မှုများသည်ဥရောပသမဂ္ဂကိုခြိမ်းခြောက်နေသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ပြင်သစ်သည်မည်သူ့ကိုမျှမြေထဲပင်လယ်ကိုဝင်ရောက်ခွင့်မပြုပါ။ ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏အကြီးအကဲကပြောကြားခဲ့သည် ပြင်သစ်သတင်းစာ, La Croix နှင့်အင်တာဗျူးတွင်.
လစ်ဗျား - HRW ဟာဟာတာတာ၏စစ်ရာဇ ၀ တ်မှုများကိုစွပ်စွဲခဲ့သည်
ဇြန္လ 16, 2020 ဇြန္လ 16, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ (HRW) ကယနေ့တောင်းဆိုလိုက်သည် မာရှယ် Khalifa Haftar ၏တပ်ဖွဲ့များကျူးလွန်ခဲ့သောဖြစ်နိုင်ချေရှိသောစစ်ရာဇဝတ်မှုများကိုအရေးပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု လစ်ဗျားနိုင်ငံတွင်“ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု၏သက်သေသာဓက” နှင့်“ အကျဉ်းချုပ်ကွပ်မျက်မှု” ကိုအမှတ်အသားပြုသည်။ HRW မှ Haftar ၏အင်အားစုများသည်ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ရုရှား၊ တူရကီနှင့်လစ်ဗျား - သူတို့ရဲ့နည်းဗျူဟာကဘာလဲ။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 15, 2020 ဇြန္လ 14, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Sergey Lavrov နှင့်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Sergey Shoygu တူရကီသို့ပျံသန်းခဲ့ပြီးလစ်ဗျားရှိအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သောအစည်းအဝေးများကျင်းပနေသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်လစ်ဗျားခေါင်းဆောင် Muammar al-Gaddafi အားဖြုတ်ချသတ်ဖြတ်ပြီးနောက်လစ်ဗျားသည်ကွဲပြားသောပြည်နယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
အခြေခံဥပဒေဆန္ဒခံယူပွဲသည်ပူတင်အားရုရှားကို ဦး ဆောင်နေစေသည်
ဇြန္လ 9, 2020 ဇြန္လ 9, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
ရုရှားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ချက်ကိုမဲ ၂၀၂၀၊ ဇူလိုင် ၁ ရက်တွင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကရုရှားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအားပြင်ဆင်ရန်အဆိုပြုခဲ့သည်။ အဆိုပြုထားပြင်ဆင်ချက်တစ်ခု သမ္မတများအတွက်သက်တမ်းကန့်သတ်ဖယ်ရှားပစ်မည်။
ဇြန္လ 8, 2020 ဇြန္လ 8, 2020 Joyce Davis က	မှတ်ချက် Leave
ရုရှားနှင့်ယူအေအီး အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ် Khalifa Haftar ကအတည်ပြုခဲ့သောလစ်ဗျားအပေါ်“ ကိုင်ရိုကြေငြာချက်” လစ်ဗျားအမျိုးသားတပ်မတော် (LNA) ၏ခေါင်းဆောင်သည်တနင်္လာနေ့မှ စတင်၍ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကိုထောက်ခံခဲ့သည်။ သို့သော်တူရကီကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသည့်ကုလသမဂ္ဂအသိအမှတ်ပြုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (GNA) က၎င်းအားငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
လစ်ဗျား၌ရုရှား Mercenaries - စာရင်းများဤနေရာတွင်
ဇြန္လ 8, 2020 ဇြန္လ 8, 2020 Christina Kitova	မှတ်ချက် Leave
လစ်ဗျားခေါင်းဆောင်မိုဟာမက်ကဒါဖီသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်အသတ်ခံခဲ့ရသည်။ ထို့နောက်တွင်လစ်ဗျားသည်ကွဲပြားသောပြည်နယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဗိုလ်မှူးကြီးကဒါဖီဟုလူသိများသောကဒါဖီသည်လစ်ဗျားတော်လှန်ရေးသမား၊ နိုင်ငံရေးသမားနှင့်နိုင်ငံရေးသဘောတရားပညာရှင်ဖြစ်သည်။ သူသေဆုံးပြီးမကြာမီတွင်လစ်ဗျား၌စစ်ပွဲပြီးဆုံးကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ အဖြစ်မှန်မှာတော့စစ်ပွဲအသစ်တစ်ခုကိုလမ်းကြောင်းနှင့်အတူ mutated.
လစ်ဗျား - GNA ထရီပိုလီလေဆိပ်၊
ဇြန္လ 4, 2020 ဇြန္လ 4, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန်	မှတ်ချက် Leave
ထရီပိုလီအစိုးရ၏အင်အားများကိုလည်းအမျိုးသားသဘောတူညီမှုအစိုးရ (GNA) ဟုလည်းလူသိများသည်။ အထွေထွေ Khalifa Haftar အပေါ်သစ္စာရှိသောတပ်များမှမြို့တော်လေဆိပ်အားပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့သည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ။ GNA စစ်တပ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရသူ Mohamed Qanunu ကလေဆိပ်သိမ်းယူခြင်းသတင်းကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည်။